Oracle waxay shaacisay sii deynta Java SE 15, ogow waxa cusub | Laga soo bilaabo Linux
Kadib lix bilood oo horumar ah, Oracle ayaa ku dhawaaqday sii deynta nooca cusub ee Java SE 15 iyada oo ah tixraac tixraacyo adeegsanaya il furan OpenJDK mashruuc.
Java SE 15 waxaa loo kala saaraa inay tahay nooc taageero joogto ah, iyada oo cusbooneysiinta la sii deyn doono illaa nooca xiga. Java SE 11 waa in loo isticmaalaa sidii lugta taageerada muddada-dheer (LTS) iyo cusbooneysiinta ayaa la sii deyn doonaa illaa 2026. Laankii hore ee Java 8 LTS waa la taageeri doonaa ilaa Diseembar 2020. Sii deynta LTS ee soo socota ayaa loo qorsheeyay Sebtember 2021.
Astaamaha ugu muhiimsan ee cusub ee Java SE 15
Qaabkan cusub, hawl taageero loogu talagalay Saxiixa EdDSA RFC 8032 ayaa la soo bandhigay, hirgalinta EdDSA kuma xirna barnaamijyada qalabka, waa laga ilaaliyaa weerarada kanaalka dhinacyadiisa (waqti joogto ah oo dhammaan xisaabinta waa la damaanad qaadayaa) waxayna ka fiicnaaneysaa hirgelinta ECDSA ee hadda jirta oo ku qoran C xagga waxqabadka, isla heerka ilaalinta.
Isbadal kale ayaa ah taageero tijaabo ah oo loogu talagalay fasallada xiran iyo is-dhexgalka in looma isticmaali karo fasallo kale iyo is-dhexgal in la dhaxlo, la dheereeyo, ama aan qarxin.
Sidoo kale lagu muujiyey qaybtan cusub ee Java SE 15 waa taageerada fasalada qarsoon ee aan toos loogu isticmaali karin bytecode ee fasallo kale. Adeegsiga muhiimka ah ee fasallada qarsoon waxaa loogu talagalay qaabdhismeedyo si firfircoon u soo saara fasallo xilliga ay socdaan oo si aan toos ahayn ugu adeegsada iyaga oo milicsanaya.
Qashin aruuriyaha ZGC (Z Qashin aruuriyaha) ayaa la dejiyay loona aqoonsaday inay diyaar u tahay isticmaalka guud. ZGC waxay ku shaqeysaa qaab dadban si loo yareeyo daahitaanka qashin uruurinta sida ugu macquulsan (waqtiga dhimista marka la isticmaalayo ZGC kama badna 10 ms) waxayna ku shaqeyn kartaa tuulmo yar iyo weyn, oo u dhexeysa dhowr boqol laga bilaabo megabytes ilaa terabytes badan.
Qashin aruuriyaha Shenandoah way xasilisay oo loo aqoonsaday meel walba. Shenandoah waxaa soosaaray Red Hat iyo waxay u taagan tahay adeegsiga algorithm yareeya waqtiyada hakadka inta lagu jiro qashin ururinta markaad nadiifinaysid barbar socda barnaamijyada Java.
Sidoo kale taakulaynta qolalka qoraalka waa la xasiliyay wuxuuna ku galay luuqada: a qaab cusub oo xadhig suugaaneed Waxay kuu oggolaanayaan inaad ku darto xogta qoraalka multiline ee koodhkaaga isha adigoon isticmaalin jilayaasha baxsashada iyo ilaalinta qoraalka asalka ah ee baloogga.
Dhanka kale Legacy DatagramSocket API dib ayaa looga shaqeeyay sidii fulinta java.net.DatagramSocket iyo java.net.MiclicicastSocket fulintooda waxaa lagu badalay dhaqan gelin casri ah oo sahal ka dhigeysa lana dayactirayo, isla markaana la jaan qaadi karta mawduucyada farsamaysan ee ay soo saartay mashruuca Loom.
Haddii ay dhacdo xad-gudub suurtagal ah oo ku saabsan koodhka jira, hirgelinta hore lama saarin oo waa la hawlgelin karaa iyadoo la adeegsanayo ikhtiyaarka jdk.net.usePlainDatagramSocketImpl.
Sidoo kale, hirgelin labaad oo tijaabo ah oo iswaafaqsan qaab ayaa la soo jeediyey ee ka hawlgala "tusaale ahaan", kaas oo kuu oggolaanaya inaad isla markiiba qeexdo doorsoomaha maxalliga ah si uu u helo qiimaha la xaqiijiyay.
Ugu dambeyntiina, hirgelinta labaad ee tijaabada ah ee loo yaqaan 'record' keyword ayaa sidoo kale la muujiyey, taas oo siisa qaab isafgarad ah qeexitaannada fasalka, iyadoo laga fogaanayo baahida loo qabo in si cad loo qeexo dhowr habab oo heer hoose ah sida isleeg (), hashCode () iyo toString (), xaaladaha marka xogta lagu kaydiyo oo keliya meelaha.
Finalmente isbeddelada kale ee muuqda:
Qoraal labaad oo ah marin u helka xusuusta dibadda API ayaa la soo jeediyey
Farsamaynta hab-u-adeegsiga Qufulidda Qufulka ee loo adeegsado HotSpot JVM si loo yareeyo qufulka korku wuu naafoobay oo hoos loo dhigay.
Firfircoonida RMI ee farsamooyinka duugoobay ee lagu dhawaaqay, oo laga saari doono sii deynta mustaqbalka.
Dekedaha ayaa laga saaray Solaris OS iyo processor-ka SPARC (Solaris / SPARC, Solaris / x64, iyo Linux / SPARC).
Si aad rabto inaad waxbadan ka ogaato ku saabsan noocaan cusub. Waxaad ka eegi kartaa faahfaahinta Xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Barnaamijka » Oracle waxay shaacisay sii deynta Java SE 15, ogow waxa cusub
Deepin Linux 20 waa la heli karaa waxayna la imaaneysaa hagaajinta bootka, rakibida iyo waxyaabo kale oo badan